7 Izimakethe Ezihamba phambili EYurophu | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 7 Izimakethe Ezihamba phambili EYurophu
Thatha isitimela uye endaweni efanelekile ukugqekeza kwedolobha noma ukuyothenga, izinhloko-dolobha ezimangalisa kakhulu eYurophu zinakho konke. Izimakethe ezikhungethe lapho i-retro nesimanje khona, okwamanje nomlando, Hlanganani, lapho kuvela khona izinto ezinkulu, kanye neyethu 7 izimakethe ezihamba phambili eYurophu ziyisibonelo esihle.
Uma uzimisele ngokuthenga, futhi ikakhulukazi okuqoqwa kwamavini, bese kuba lezi 7 izimakethe ezihamba phambili eYurophu kuzoba iphupho eligcwaliseka. Mane nje ulandele izimakethe zethu zokugcina eziseYurophu, bese ubamba i- ipotimende elikhulu!
1. Imakethe Yezinhlanzi zaseMunich
If you are heading to Bavaria for the Amaholide aseYurophu entwasahlobo, futhi ngifuna amagugu amasha wevintage, lapho-ke uzothanda imakethe enkulu yaseMunich. Le makethe emangazayo imaka umkhosi wasentwasahlobo futhi ibanjwa kanye ngonyaka.
Kuzophela 2000 abathengisi, ngevintage emangalisayo kuyinto, njengesikhwama seLouis Vuitton ngamanani ahlekisayo. Ngakho-ke, kufanele ucacise ukuthi uMgqibelo wemakethe yezintambo eRiesen-Flohmarkt Theresienwiese eMunich. Ngaphezu kwalokho, woza nohlu lwezitolo olucacile, futhi ube khona ekuseni ngangokunokwenzeka. Iminyango ivuleka ngo- 4 am, futhi ngeke ube ukuphela kwenyoni yokuqala!
2. Imakethe yase-Amsterdam
Uma kwenzeka ungazi, I-Amsterdam idolobha elinomlando ocebile wezohwebo. Ngakho-ke, akumangalisi ukuthi enye yezimakethe ezihamba phambili eYurophu ise-Amsterdam. Kanye ngonyaka, imigwaqo ebukekayo e-Amsterdam, phenduka imakethe evulekile, lapho ungathenga khona bese ucwilisa umoya omangalisayo kwenye ye amadolobha amakhulu eYurophu.
Kanye ngonyaka, njengomgubho ngoSuku lweNkosi, imisele nemigwaqo yase-Amsterdam iguqula ibe yimakethe enkulu yezikhukhula. Ukuvuna okuhle, art, amagajethi, neminye imicebo yesekeni izokulinda kule makethe emangazayo.
Nini? 6 nginguye 8 ntambama ngo-Ephreli 27.
I-Bremen eya e-Amsterdam Amanani Wokuqeqesha
IHannover iye eAmsterdam Amanani Esitimela
IBielefeld kuya kuAmsterdam Izintengo Zesitimela
IHamburg iya eAmsterdam Amanani Esitimela
3. IGrande Braderie De Lille
Imakethe emikhulu futhi edume kunazo zonke eFrance, kuzobe kusingathwa imakethe emikhulu yaseGrande Braderie de Lille 10,000 abathengisi.
Imakethe yezintambo zeLille ingumcimbi omkhulu kakhulu onyakeni futhi yenzeka ngempelasonto yokuqala kaSepthemba. Uma uvuna, nezinto ze-retro, lapho-ke kungakuhle ubhuke ithikithi eLille ngoSepthemba 4th– 5th, i-extravaganza yevintage.
Kuthiwa, ukuthi kuzokusa eduze 40 amahora nje ukuhamba kuzo zonke izitendi, futhi lokho ngaphandle kokuma nokuthenga.
Amabinzana ambalwa awusizo wokuwagcina & funda:
“Iyiphi intengo yakho enhle kakhulu?”- Iyiphi intengo yakho engcono kakhulu?
“Coupons la poire en Deux” - Masihlangane phakathi / sitele izivumelwano
Kanjani lapho? Take an hour Uhambo lwesitimela lwe-TGV lusuka eParis.
4. Imakethe Yomgwaqo wasePortobello eLondon
Imakethe ehamba phambili kunazo zonke eNgilandi yenzeka nsuku zonke emakethe yasePortobello eLondon. Imfashini, izinto zakudala, ukudla, futhi amagugu esekeni azokulinda zonke izinsuku zesonto, kepha zilungiselele ukukhuphula amandla nombala ngoMgqibelo.
Ngakho, ngemuva kosuku lokuthenga kwasendulo, ungathatha imifino emnandi, ushizi, nokunye ukuphatha isidlo sasemini esisheshayo ngaphambi kokuqhubeka nokufuna kwakho ukuvuna emakethe yemfashini eWestway. Ukuvakashela iPortobello Road market kungenye yezinto ezinhle kakhulu ongazenza eLondon, futhi kufanele unikezele usuku olugcwele kule makethe yezimakethe kanye nomlando waseLondon.
5. Imakethe Yezinhlanzi zaseParis
Lapho sicabanga ngeParis, siwucabanga ngokushesha umkhathi. Okukhethekile, engaqondakali, lasendulo, royal all come to mind with Paris, nasemakethe yakhe emangalisayo.
Imakethe yaseParis ingenye yezimakethe ezihamba phambili eYurophu ngenxa yengcebo engavamile efihlayo. Ubuciko base-Afrika, izingcezu zokuhlobisa ukuvuna, nezingubo ezimbalwa nje zezinto ozozithola kule makethe enkulu kangaka.
Uma ufisa ukuletha isiqeshana esincane seParis nawe, khona-ke imakethe yaseParis iyindawo yokuthenga. Uqala imfuno yakho Umgwaqo uRosiers, umgwaqo omkhulu, and walk down in order to go into the separate markets.
Kanjani lapho? Thatha umgwaqo omkhulu, ikhanda ePorte de Clignancourt ku-Line 4, bese ulandela izixuku zibheke endaweni enkulu eyeqile kakhonkolo.
6. Imakethe Yemidlalo Yebhola laseBrussels
Imakethe eyodwa kuphela evulekile 365 izinsuku ngonyaka, imakethe yeBall Game eBrussels, futhi inkulu kakhulu eBelgium.
Enhliziyweni yesifunda saseMarolles, uzothola amarekhodi okuvuna, nezincwadi ezingandile ezibekwe phezu kwezingubo zokulala. Emigwaqweni eseduze, uzothola izitolo ezingamasekeni nezasendulo.
Nini? Isikhathi esihle kakhulu sokufuna ingcebo ngoLwesine nangoLwesihlanu.
Kuphi? Indawo du Jeu de Balle Brussels
Kunezimakethe eziningana ezigcwele eMilan, futhi lokho akumangazi njengoba kuyinhlokodolobha yezemfashini emhlabeni. IMercatone dell’Antiquariato iyimakethe enkulu kunazo zonke eMilan futhi yenzeka ngeSonto lokugcina lenyanga zonke. Kuzoba khona 380 izitendi zefenisha yasendulo nezimpahla zokuvuna, ngikulindile.
Nokho, imakethe emikhulu kunazo zonke eMilan iMakethe eseMpumalanga. Uma ufuna izingcezu eziqoqekayo noma ubuciko besimanje lapho-ke uzothandana nemakethe yaseMpumalanga. Ngaphandle, ungathatha isidlo sasemini noma ubhiya kusethi ye-DJ, ngenkathi uzulazula ezindaweni ezimakethe ezipholile. Uma usungenile, ngeke ufune ukushiya lokhu i-retro & iphathi yokuvuna.
Kuphi? Nge-Mecenate, 84
Nini? Njalo ngeSonto
Ungafika kanjani eMpumalanga Market eMilan? Thatha umugqa we-M2 metro
IYurophu iyi-fusion ejabulisayo ye-retro neyesimanje, eza ukuhlala ezimakethe ezimangazayo kakhulu. Uhambo oluya eYurophu ngeke luphele ngaphandle kokuchitha usuku kokunye okuhle kakhulu 7 izimakethe ezikhungethe eYurophu. Ngaphezu kwalokho, ukubuyela ekhaya ngaphandle kokungenani 1 isiqeshana sevintage kufana nokuthi awukaze uvakashele iYurophu nhlobo.
Lapha e Londoloza Isitimela, sizojabula ukukusiza uhlele uhambo lwakho lokuya kulezi 7 izimakethe ezihamba phambili eYurophu ziqeqesha.
Ngabe ufuna ukushumeka okuthunyelwe kwebhulogi lethu “7 Best Flea Markets In Europe” ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-flea-markets-europe%2F%3Flang%3Dzu - (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
bestmarketseurope	Biggestfleamarketeurope	Europefleamarkets	Europeshopping	fleamarket	yezitolo	Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi